Lix arrimood oo xasaasi ah oo laga sheegay Trump - BBC News Somali
Waraysi uu la yeeshay TV, ka hor buug uu Talaada shaacin doono, ayuu sidoo kale ku sheegay in Ruushka ay dhici karto inay sii daayeen akhbaar ku saabsan Mr Trump.
Buugga ayaa madaxweyne Trump kala mid dhigaya sidii nin madax u ah qowleysato, iyo faahfaahin ku saabsan in uu ka caado yeeshay dumar jirkooda ka ganacsada oo jooga Moosko.
Twitter ayuu Mr Trump ku soo qoray "James Comey simbiriirixday", wuxuuna sheegay inuu been u sheegay koongareeska.
1. 'Aan niyad ahaan taam ahayn'
ABC News ayaa sii deysay qoraalka waraysiga oo ka kooban 42,000 oo kalmadood.
Wariyaha barnaamijka 20/20 waday, George Stephanopoulos, ayaa Mr comey waraystay habeennimadii Axadda.
Markii la weydiiyey inuu Mr Trump u arko inuu yahay nin taam ah inuu wax hogaamiyo, ayuu sheegay agaasimihii hore ee FBI inuusan rumaysnayn sheegashooyinka caafimaadka maskaxed ee Mr Trump, laakinse uu u arko nin aan niyad ahaan taam ahayn inuu madaxweyne noqdo.
"Shakhsi u arka in wixii ka dhacay Charlottesville ay yihiin wax niyad ahaan la qaadan karo, oo uga hadla ulana dhaqma dumarka sidii inay yihiin gaballo hilib ah, oo wax kasta, yar ama weyn, si joogto ah uga been sheega, kuna adkaysta in dadka Ameerikaanku rumaystaan, qofkaas taam uma aha inuu noqdo madaxweynaha Maraykanka," ayuu ku yiri Mr Stephanopoulos.
Mr Comey wuxuu ka hadlayey dooddii uu madaxweynuhu ka yiri "labada dhinacba" inay ku khaldanaayeen rabshadihii qolyaha aamisan sarraynta dadka caddaanka ah ee Charlottesville, Virginia, sannadkii hore.
James Comey: "Trump anshax madaxweyne malaha"
Comey: Trump daacad ii noqo ayuu yiri
Image caption Mr Trump dhaleeceyn ayuu kala kulmay hadalkiisa Charlottesville.
2. Is hortaag caddaalad
Qayb kale oo waraysiga ah ayaa lagu soo qaaday la taliyihii amaanka qaranka ee shaqada laga eryey Febraayo 2017, Michael Flyyn, ka dib markii uu ka been sheegay xiriirro lala sameeyey safiirka Ruushka ee Washington.
Agaasimihii hore ee FBI wuxuu sheegay in Mr Trump uu isku dayey inuu cadaadis ku saaro inuu ka haro wixii baaritaan ah ee ku socda Mr Flyyn.
"Waxaan u qaatay amar" ayuu ku yiri Stephanopoulos.
"Xaqiiqadii waa caddayn ah is hortaagid cadaalad. Waxay ku xiran tahay - aniguna kiiskan markhaati ayaan ka ahay, kamana ihi baare ama dacwad ooge, waxay ku xirnaanaysaa arrimmo kale oo muujinaya damaciisa".
Mr Trump wuxuu aad u beeniyey arrintaas uu Mr Comey soo qaaday.
Image caption Flyyn wuxuu shaqada ka tegey 23 maalmood ka dib
In kastoo ay arrimahaas jiraan misna Mr Comey ma qabo in madaxweynaha dacwad lagu oogo.
"Waxay ila tahay in dacwad lagu oogo oo xafiiska laga qaado Donald Trump waxay dadka Ameerikaanka ka saaraysaa dhibaatada" ayuu ku yiri Stephanopoulos.
Taa beddelkeeda wuxuu rumaysan yahay in dadka Maraykanka ay "waajib ku tahay" inay Mr Trump iskaga leexiyaan "si toos ah" ayagoo adeegsanaya codkooda doorashada.
Qoraalka qudhiisa ayuu Mr Comey la barbar dhigay Mr Trump sidii inuu yahay nin madax u ah koox dambiileyaal ah.
4. Baaritaanka emaillada Clinton
Waraysiga wuxuu ku sheegay Mr Comey in rumaysnaanta uu rumaysnaa in Hillary Clinton ay ku guulaysanayso doorashadii madaxtinimada ee 2016 ay qayb ka ahayd sidii uu u maamulay qaabkii ay u isticmaashay emailladeeda gaarka ah xilligii ay ahayd xoghayaha arrimaha dibadda.
"Waxaan ka shaqaynayey duni Hillary Clinton ay ka guulaysanaysay Donald Trump" ayuu yiri Mr Comey.
"Sidaa darteedna waxaan hubaa inay qayb ka ahayd.
Ma garanayo sida loo dhigayo laakin sidaa ayey ahayd. Waxay ahayd in ayada loo dooran doono madaxweynenimada, haddii aan tan ka qariyo dadka Ameerikaankana ay sharci darro noqonayso marka la doorto, marka ay soo baxdo".
Bishii Luulyo 2016, Mr Comey wuxuu sheegay in Hillary Clinton ay "taxadar la'aan weyn" samaysay, taasoo ku saabsan sidii ay u isticmaashay emailladeeda, laakinse aysan FBI-du dacwad ku soo oogin.
5. Dumarka jirkooda iibiya ee Moosko
Agaasimihii hore ee FBI wuxuu sheegay in ugu yaraan afar goor uu Mr Trump soo qaaday arrin aan la xaqiijin oo ah inuu toos u daawaday dumar jirkooda iibiya oo fuxshi ku samaynaya hotel ku yaalla Moosko, mar uu halkaa socdaal ku joogay 2013.
Arrimahan ayaa ku soo baxay qoraal mukhaabaraadku hayaan oo aan weli bislayn, kaasoo uu uruuriyey basaas hore oo Ingiriis ah oo ay kiraysteen qolyo ay cadaawad kala dhaxaysay Mr Trump, si loo soo qufo ceebihiisa.
Mr Comey wuxuu sheegay in Trump uu si caro leh u beeniyey, uuna ka dalbaday in FBI-du ay wax-kama-jiraan ka soo qaaddo bacdamaa ay dhibaato ku yihiin xaaskiisa, Melania Trump.
Wuxuu qoray in arrinta lagu soo qaaday kulan ka dhacay Trump Tower, Janaayo 2017, in yar ka hor caleema saarkii madaxweynaha.
Image caption Agaasimihii hore ee FBI, James Comey
6. Gacmaha iyo timaha Trump
Mr Comey oo dhererkiisu yahay 6ft iyo 8in wuxuu sheegay in markii ugu horraysay ee uu la kulmay madaxweynaha oo dherekiisu yahay 6ft iyo 3in, inuu u muuqday sidii inuu ka gaaban yahay marka laga arkayo Tvga.
"Wajigiisu wuxuu u yara muuqday mid oranje ah" ayuu qoray Mr Comey, "oo indhaha hoostoodana ku leh laalaabyo aad u muuqda. Waxaan u qaatay inuu xiran jiray ookiyaaleyaal yaryar, oo timihiisana laga sii shaqeeyey kuwaasoo leh midab dahabi ah oo ifaya, oo marka aad u dhawaato aad arkayso inay yihiin kuwo run ah oo aan gacan ku samays ahayn.
Markii uu gacanta soo taagay ayaan maskaxda ku sii qortay dhumucdiisa. Wuu iga yaraa xajmi ahaan, laakin ma ahayn si qayrul caadi ah" ayuu yiri.